Apple dia manomboka mampiditra ny charger 20W ao amin'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Ny iPad Pro vaovao dia tonga volana vitsivitsy lasa izay ary nanomboka teo dia nahomby tamin'ny varotra izy ireo. Fampidirana ny fitaovana iray manontolo miaraka amin'ny Magic Keyboard ary ny Apple Pencil dia mitaona ny mpampiasa hividy azy ireo. Zava-baovao iray hafa izay nentin'ireto iPad Pro vaovao ireto ny fahatongavan'ireo USB-C. Ny tariby nampidirina tao anaty boaty vokatra dia USB-C sy adapter herinaratra 18W. Na izany aza, ny hetsika farany nataon'ny Apple manala ny charger amin'ny iPhone 12 dia nahavita izany Atombohy ny fampidirana adapter 20W amin'ny iPad Pro, hany ka manomboka ny fanitarana an'ity charger ity manerantany i Apple. Mazava ho azy, miaraka amin'ny iPad Pro.
Ny iPad Pro vaovao dia hitondra ny adapter 20W
Nesorin'i Apple ny boaty sy ny tariby tao anaty boaty iPhone 12. Na izany aza, ny charger izay alefa amin'ny iPhones matetika dia tsy manohana famandrihana haingana ao anatin'ny fenitra MagSafe amin'ny fitaovana vaovao. Ho an'ity dia ilainao adapter 20W famandrihana izany dia afaka manome ny fitaovana amin'ny 15W.
Izany no antony Apple dia nanomboka nampiditra ny adaptatera 20W famandrihana amin'ny iPad Pro. Afaka fantantsika izany noho ireo kofehy maromaro ao Reddit izay nitsangana toy ny sombin-javatra. Miaraka amin'ity adapter ity, raha afaka mahatratra ny hery lehibe indrindra amin'ny fiampangana MagSafe an'ny iPhone vaovao isika. Ny fampidirana an'ity adapter vaovao ity dia roa. Amin'ny lafiny iray, hanatsarana ny enta-mavesatra amin'ny iPad Pro sy ny iPhone 12. Nefa koa satria Apple dia te-hanitatra ny 20W ho an'ny mpampiasa rehetra.
Satria mazava fa manana charger 'taloha' ny tsirairay, fa raha te hividy an'ity 20W vaovao ity isika dia tsy maintsy mandoa 25 euro miampy ny tariby misaraka. Na izany aza, ny vola hanovana hahazoana ny charger vaovao dia ny fividianana iPad Pro izay tsy mora ny vidiny ary mety tsy hanonitra izany raha tsy mieritreritra ny hahazo izany isika. Raha mividy ny tranokala Apple isika, izay ao anatin'ny raharaha iPad Pro dia lany andro Noho ny antony tena tsotra: mbola misy iPad Pro mivezivezy miaraka amin'ny charger 18W. Tsy afaka manao dokambarotra zavatra mety tsy ho tonga ianao raha mividy azy amin'ny Internet. Mandra-pahatanterahan'ny Apple fa ny iPad Pro rehetra dia manana charger vaovao, azo inoana fa tsy hanavao ny tranokalany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Apple dia manomboka mampiditra ny charger 20W ao amin'ny iPad Pro
Podcast 12x08: Hodinihinay ny hetsika "Zavatra iray hafa"
Io no endrik'ireo fitaovana voalohany amin'ny AirTag an'ny Apple